LA OGAADAY: Wakiilka CR7, Jorge Mendes Oo Wadahadalo Qarsoodi Ah La Yeeshay PSG Saacado Ka Hor Finalkii Champions League - Laacib.net
LA OGAADAY: Wakiilka CR7, Jorge Mendes Oo Wadahadalo Qarsoodi Ah La Yeeshay PSG Saacado Ka Hor Finalkii Champions League
Paris Saint-Germain ayaa talaabo ka horeysa kooxaha la xafiiltamaya haddii Cristiano Ronaldo uu go’aansado inuu isaga tago Real Madrid, ka dib markii kooxda Faransiiska ay wadahadalo hordhac ah magaalada Cardiff kula yeelatay wakiilkiisa, sida ay qortay jariirada Ingariiska ee Mail on Sunday.
Ronaldo oo 32 sanno jir ah ayaa u sheegay Madrid inuu isaga tagi doono Spain haddii lagu helo danbiga ah qiyaano canshuur xagaagan. Xiddiga sannadka adduunka ayaan aaminsaneyn in loola dhaqmay si cadaalad ah markii dowlada Spain ay ku eedeysay inuu qiyaameeyay canshuur ku dhow 15 milyan yuro.
Haddii uu ka tago kooxda heysata koobka Champions League, PSG ayaa ugu horeyn doonta safka loo galayo tartankiisa ka dib markii ay wadahadalo la xiriira mustaqbalka Ronaldo kala yeesheen wakiilkiisa Jorge Mendes labo isbuuc ka hor finalkii Champions League.
Mail On Sunday ayaa shaacisay in Mendes uu kula kulmay madaxweynaha PSG Nasser Al-Khelaifi caasimada Wales galabnimadii finalka Champions League ee 3dii bishaan Juun. Saacado ka hor inta uusan Ronaldo wacdarro ka dhigin finalkii ay Real 4-1 kaga badisay Juventus, Mendes ayaa kulan labo saacadood ah waxa uu ganacsadaha reer Qatar kula qaatay huteelka Hilton.
Mendes ayaa durbaba xiriir la leh kooxda Faransiiska isagoo wakiil u ah Angel di Maria, waxaana uu doonayaa inuu ciyaartoyda kale ee wakiilka u yahay uu geeyo kooxda xagaagan sida daafaca Real Madrid Pepe.
Si kastaba, waxaa la fahamsan yahay in Mendes uu u sheegay Al-Khelaifi intii uu socday kulankaas in dhibaatooyinka Spain ku soo wajahaya Ronaldo inay yihiin kuwa soo dhawaanaya, halka madaxweynaha PSG uu dhankiisa weydiistay Mendes inuu ku soo wargeliyo wax walba oo ka soo cusboonaada xaaladiisa.
PSG ayaa muddo sannadooyin ah dooneysay Ronaldo waxaana ay ka warqabaan in xiddiga reer Portugal uu maqaamkooda sarre u qaadi karo. Kooxda Faransiiska ayaa u maleyneysay inay fursad u heysteen saxiixa Ronaldo 18 bilood ka hor laakiin Ronaldo ayaa markaas qandaraas cusub u saxiixay kooxda Bernabeu ka dhisan.